Okwu nkpuchi nke Google | Martech Zone
Na nke iri na asatọ, Google kwuru na ọ ga-amalite izochi mkpụrụ okwu ndị mmadụ tinyere na akaụntụ google (Gmail, Youtube, Google+, wdg). Na-akpali mmasị, na aha nzuzo, Google ga-eme naanị ya na nchọta ọchụchọ ya. N'uche m, nke ahụ bụ BS na nke a yiri ka ọ bụ ezigbo ọjọ gaa na akwukwo m. Dị ka Google na-etinye oge ịkụziri ụlọ ọrụ ọchụchọ otu esi eme ka ọdịnaya ya ka mma wee were ya rụọ ọrụ maka isiokwu, ịzobe data dị ka nke a jọgburu onwe ya.
Ọ bụrụ na ha họrọ izobe ha maka ọchụchọ akwụ ụgwọ yana itinye ego nke mgbasa ozi ọchụchọ akwụ ụgwọ, enwere m ike ikwenye. A na-eji Google ezochi isiokwu iji rụọ ọrụ n'etiti njirimara ya? Ọfọn, mba… ndị ahụ bụ akụ ha ka ọ ghara ịgụ. Ọ bụ naanị izochiri ha onye ọ bụla ọzọ dị mkpa. Ihe omuma ihe di n'okpuru Mgbakwunye, na-akọwa uru na ọghọm nke ịkwaga ahụ.
Otu ndetu na nke a. Google na-atụ anya na nke a ga-emetụta ihe dịka 10% nke gị nchịkọta Nsonaazụ isiokwu. Ọ pụtakwara na ha ka na-enyere ojiji nke Keywords n'ime Njikwa Nchọta Google… maka ugbu a.
Ọkt 30, 2011 na 8:13 PM
Damn, kedụ ihe anyị ga - eme dị ka onye na - ahụ maka SEO mgbe anyị enweghị data!
Ọkt 30, 2011 na 8:57 PM
Ezi ajụjụ, Myindustry! Maka ugbu a, ị nwere ike ịga n'ihu na-adabere na Webmasters… mana inwe ike ijikọ ntụpọ n'etiti isiokwu ziri ezi na ntụgharị agaghị ekwe omume possible naanị ihe puru omume. Ma ọ bụ jiri mpaghara nke ndị ọbịa na-abanyeghị.
Na Ngwọta Weebụ Houselọ
Jenụwarị 31, 2012 na 5:15 PM
Ka nwere ike iji mmemme dị ka seomoz iji nweta ụfọdụ data a na ikekwe Alexa.
Jenụwarị 31, 2012 na 5:13 PM
Ooooo! Nke a n'ezie eme nzuzu. M na-eche ihe mere m ji nwee ọtụtụ mkpụrụokwu anaghị enye m nyocha m na nyocha. Nke a bụ n'ezie ịrụpụta arụpụta. Enwere m mmasị na eserese nke kere na-enyere ndị mmadụ aka ịghọta nke a nke ọma!